Kwalite ezumike gị ezumike ebe nrụọrụ weebụ na njirimara Blog
atụmatụ » blog
Mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị elu na nsonaazụ ọchụchọ na ọrụ ntanetị nke Zeevou.
Ọtụtụ PMS-es na-enye ụlọ ọrụ njikwa ihe onwunwe injinia ntinye akwụkwọ maka ntinye akwụkwọ ozugbo. Ọbụna n'okwu ndị kachasị elu, mgbe a na-enye ndebiri dị iche iche na nhazi nke onye ọbịa chọrọ ịhọrọ, arụmọrụ nke ntinye akwụkwọ ntinye oke dị oke.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile nke a pụtara na ọ gaghị ekwe omume ịgbakwunye peeji nke omenala, ma ọ bụ iji gbaa blọọgụ na Channel Channel ma ọ bụ Onye na-enye gị Ntinye Ngwa. N’ihi nke a, a manyere ndị na-agbazinye ezumike ezumike inweta ebe nrụọrụ weebụ dị iche, dị ka WordPress or Wix, iji nwee ike ịme blọgụ. E wezụga nsogbu nke inwe ọtụtụ sistemụ, ịtọlite ​​ma jigide saịtị dị otú ahụ na-agbakwụnye na nsogbu nchịkwa, na ịtinye ihe ọhụrụ na usoro nke gị na-ewere oge abụọ dị ka ọ kwesịrị.
Kedụ ka Blog Zeevou nwere ike isi nyere aka?
Emepụtara Zeevou na akpaghị aka Direct nrụọrụ weebụ eme ọtụtụ ihe karịa ịnye igwe ntinye akwụkwọ nke ndị ọbịa nwere ike itinye akwụkwọ. N'ezie, anyị na-enye azịza zuru oke iji nyere gị aka ịkwalite ogo gị na nsonaazụ njin ọchụchọ. Nke a nwere ike inyere gị aka ịkwanyekwu okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ile ọbịa gị, ma mụbaa ọnụego ndị ọbịa na-eleta saịtị gị bụ ndị na-aga akwụkwọ.
E wezụga inwe ike itinye peeji nke ahaziri iche, Zeevou na-enye gị ohere ịgba ọsọ otu (ma ọ bụ ọtụtụ) blọọgụ, niile si anyị isi ehiwe. Site na ịde blọgụ banyere ebe nkiri mpaghara, ị nwere ike itinye ọdịnaya bara uru na weebụsaịtị gị. Ọhụrụ ọdịnaya bipụtara na weebụsaịtị na mgbe niile bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị na Search Engine Optimization. Site na ọrụ Blog nke Zeevou, ị nwere ike ịkwụsị ichegbu onwe gị banyere akụkụ ọrụ aka nke ịtọlite ​​na ịnọgide na-enwe blog, ma lekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya SEO-kachasị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụkwa n'akụkụ a, biko kpọtụrụ Onye Mmekọ Onye Ọga nke Ọma ozugbo ị debanyere aha na anyị nwere ike ịnye gị nkwupụta maka ederede ọdịnaya na eserese iji mee ka blọgụ nke webụsaịtị gị bawanye.